အင်္ဂလိပ်စာ‌‌‌လေ့လာနည်းများ - Saya Zin
English Listening Skill ဘယ်လို လေ့ကျင့်မလဲ ?
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာလိုသူ / လေ့လာနေသူ အတော်များများ ကျွန်တော့်ကို လာမေးလေ့ရှိလို့ အတိုချုံးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ သေချာလေး ဖတ်ရင်းတွေး ၊ တွေးရင်းဖတ် သွားပါဗျာ ။ ? တစ်ဆင့်ချင်း လေး ပြောပြသွားပါ့မယ် ။ Listening လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာ ရေရှည်လုပ်ရမှာမို့ ကိုယ် စိတ်...
မိမိဘာသာ လေ့လာလိုသူများ အတွက် – ၁
♦ English ဘာသာစကားကို မိမိဘာသာ လေ့လာလိုသူများ အတွက် ♦ English ဘာသာစကားကို ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲဆိုတာ ကို အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းမေးတဲ့ လူတွေများတယ် ။ သင်တန်း ဆင်းသွားတဲ့ တပည့်တစ်ချို့လည်း ပြန်မေးတတ်ကြတယ် ။ < တကယ်က သူတို့ကို သင်တန်း စဖွင့်တဲ့ ပထမဆုံး ၂ ရက်မှာ...